Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Mpilalao baolina kitra frantsay Moussa Dembele tantaram-pitiavana bebe kokoa fantatry ny mpahay siansa momba ny tantaram-piainana
Rehefa manomboka izy dia nomena anarana hoe "Hunskelper". Manome anao ny fandrakofana feno momba ny Moussa Dembele Childhood Tantara, Biography, Family Facts, ray aman-dreny, fiainana voalohany, fiainana manokana, fiainana ary fiainana hafa fanta-daza hatramin'ny fahazazany hatramin'ny naha-izy azy.
Ny Fiainana sy misandratr'i Moussa Dembele frantsay. Image Credit- SportsMole, Orange, Instagram ary Leparisien
Eny, fantatry ny rehetra izy dia mahery tokoa, manan-talenta amin'ny fikorontanana tsara, fahatsapana toerana sy maso ho tanjona. Na dia izany aza, vitsy ihany no mihevitra ny biolojia Moussa Dembele izay tena mahaliana. Izao raha tsy mila ado intsony, andao hanomboka.
Moussa Dembele Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra momba ny tantaram-piainana - Fiainana tany am-piandohana sy fianakaviana
Moussa Dembele dia teraka tamin'ny andro faha-12 tamin'ny volana Jolay 1996 ho zanaka faharoa ho an'ny ray aman-dreniny any Pontoise, kaominina any amin'ny tanàna avaratra andrefan'ny Paris, France. Nifindra tany amin'ny tany andrefan'ny Mali any Afrika Andrefana ny ray aman-dreniny.
Moussa Dembele izay teraka tany Frantsa, dia manana ny fianakaviany avy any Mali
Ny ray aman-dreny roa, rehefa avy nipetraka ny fireneny tany am-piandohan'ny 1990s nivory tany Frantsa ary nanambady tany amin'ny tanàna kely iray any Pontoise, avaratr'i Paris. Pontoise dia Suburbs any Paris izay matetika hita fa foiben'ny fametrahana sy fampivondronana ny fianakaviana ho an'ireo mpifindra monina Mioziana mandao ny tanindrazany ho any Frantsa. Fantatrao ve?… Ireo mpifindra monina Miozolomana malaza amin'ity faritra ity no misy ny fianakavian'i Moussa Sissoko ary N'Golo Kanté.
Moussa Dembele dia tsy nobeazina tao amin'ny fianakaviana manankarena. Tahaka an'i Kante, ny dadany sy ny reniny dia toy ny ankamaroan'ny olona manao asa tanana nefa tsy nanana fanabeazana tsara indrindra, matetika dia sahirana amin'ny vola. Moussa Dembele dia lehibe tao amin'ny vohitra kely iray avaratry ny Paris tao anilan'ny rahavaviny izay mitondra ny anaran'i Dembiz Balla sy ny zokiny izay zara raha mahalala.
Moussa Dembele dia niara-lehibe niaraka tamin'i Sin anabaviny. Image Credit- Instagram
Amin'ny mbola kely, Moussa Dembele dia tena voatahiry, olona izay matetika tavela amin'ny fiaraha-monina. Tsy dia misy hetsika maro toy ny ankizy hafa ao amin'ny manodidina azy Pontoise izy. Raha tokony handeha hilalao hiarahana amin'ny namany, aleony i Dembele'd mijoro ary mijery ilay zaza hafa ao anatin'izany ny rahavaviny sy ny rahalahiny. Vokatr'io fihetsika io, dia tsy entin'ny vahiny ho any an-tranon'ny namany irery izy matetika.
Moussa Dembele Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra momba ny tantaram-piainana - Fanabeazana sy fanabeazana
tahaka N'Golo Kanté, Malawi namany izay manana toetra saro-kenatra, milalao baolina dia nanjary loharanom-pankasitrahana ary fandosiran'i Dembele ny tenany manokana amin'ny zava-misy iainany.
Soa ihany, teo anoloan'ireo mpilalao baolina kitra taloha sy ireo tamin'ny taonany, i Dembele dia nianatra ny fomba hivoahana, sahy ary hatoky rehefa naneho toetra tsara niaraka tamin'ny baolina izy. Na dia tany am-pianarana aza dia handeha hilalao baolina izy mandritra ny ora fisakafoanana sy ny fanatanjahan-tena. Tsy vitan'izany fa, mandritra ny fialantsasatra, hilalao baolina i Dembele mandritra ny adiny rehetra amin'ny maraina sy amin'ny hariva.
Tsy nanam-potoana firy talohan'ny nahafantaran'i Dembele azy fa manana ny talenta hanaovana azy tahaka ny pro. Satria nanosika ny fahombiazan'ny mpifindra monina mainty hoditra ao amin'ny kapoakan'i Frantsa 1998, nanomboka nanonofy izy tamin'ny fampiasana baolina ho fomba iray hiadiana amin'ny fahasahiranana sy fanandratana ny toeran'ny fianakaviany. Dembele dia niresaka momba ny faniriany tamin'ny mpampianatra any an-tsekoly izay namporisika azy tamin'ny filazany- Ny fanolorany ny fanatanjahantena dia fampiasam-bola izay amin'ny alàlan'ny asa mafy sy ny fahavononany dia hanampy azy hijanona ho mpilalao baolina matihanina.
Andro iray tsy nivadika taorian'ny fotoam-pianarana, Moussa Dembele dia nankany amin'ny faritra an-tsaha ao Pontoise izay nanasana azy tamin'ny fifaninanana iray teo amin'ny manodidina. Taorian'ny fifaninanana izay nanaovany tsara, dia tonga tany amin'ny klioba eo an-toerana ny vaovao momba azy. Ny hafalian'ny fianakaviany manontolo dia tsy nahalala firy rehefa niantso azy hanatrika ny fitsapana nataon'ny klioba amerikana any Etazonia Cergy Clos.
Moussa Dembele Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra momba ny tantaram-piainana - Ny fiainam-piarahamonina tany am-piandohana
Fanandramana amin'ny klioba amerikana Clergy Clos eo an-toerana - izay tsy tsotra tahaka ny mahazatra. Nila ny ezaka mafy nataon'ny rahalahin'i Mousa Dembele izy ireo alohan'ny hanolorana azy ireo. Amin'ny teniny, araka FourFourTwo;
“Rehefa nanandrana ny hiaraka ny anadahiko dia nilaza izy ireo fa tsy maniry azy. Efa nanana mpilalao maro be loatra izy ireo. Saingy nanizingizina ny rahalahiko hoe: 'Omeo azy fiofanana iray fotsiny izy ary izany no izy'… Ka dia nanao izy ireo ary tsy nanenina mihitsy. ”
Moussa Dembele dia tafiditra ao amin'ny Akademia baolina kitra amerikanina Cergy Clos tamin'ny taona 6 taorian'ny nahitana fitsapana nahomby tamin'izy ireo tamin'ny taona 2002. Rehefa niditra tao amin'ny klioba izy, dia nakana hilalao ilay toerana handrosoana ary avy hatrany dia nanomboka namirapiratra teny an-tsaha.
Tamin'ny faran'ny lalao tsirairay, i Dembele no karazan-jaza izay mahavery isa amin'ny tanjony indray andro any. Izy dia mpanamory tanjona voajanahary, izay hatrany amin'ny toerana mety. Ny lazany dia tsy voamariky ny PSG taorian'ny nahitany tanjona maro ho an'ny US Cergy Clos. Taorian'ny vanim-potoanan'ny baolina kitra 2003 / 2004, ny dingana mihena no nanao ny dingana manaraka amin'ny asany tanora manohy ny dingana fahamatorana baolina kitra amin'ny akademian'ny tanora ao Paris Saint-Germain FC
Moussa Dembele Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra momba ny tantaram-piainana - Road to Fame Story
Nanohy nianatra nianatra i Moussa Dembele na dia nantsoin'ny PSG aza izy. Nahavita ny sekoly ambaratonga fototra izy talohan'ny nisoratraany Le Moulin à Vent Collège, ao Cergy, dia tanàna any amin'ny distrikan'i Avaratra andrefana.
Tamin'ny PSG dia nanomboka tamin'ny lafiny U15 i Mousa Dembele tamin'ny vanim-potoana 2010-2011. Ny toetra tsara ananany haingam-pandeha sy famaranana dia nahita azy nandrara tanjona 40 tamin'ny lalao 30, isa mahavariana izay nahatonga ny mpampianatra azy ho gaga. Ao 2012, Dembele miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminy; Kingsley Coman, Presnel Kimpembe ary Adrien Rabiot (sary rehetra etsy ambany) nofidina handray anjara amin'ny fiadiana ny amboara Al Kass any Doha.
Sary tsy fahita firy amin'ireo mpifaninana U17 PSG amin'ny Al Kass Cup any 2012. Moussa Dembele dia niaraka tamin'i Rabiot, Coman, Ongenda, Kimpembe, Maignan ary Dembele. Image Credit- Leparisien
Nandritra ny fifaninanana dia nanavaka ny tenany tamin'ny alàlan'ny fifaninanana maro ny mpiady frantsay. Ny fahatokisan'ny olo-mahay an'i Dembele dia nanampy ny ekipany handresy Tompondakan'ny Al Kass Cup tany Doha taorian'ny nandavany an'i Juventus tamin'ny famaranana.
Rehefa miserana tsara ny mandeha: Manodidina ny 2012 tany am-boalohany dia nisy tsaho momba ny fakana an-tanana PSG ary naverin'ireo tompona billionaire vaovao (Fampiasam-bola ara-panatanjahantena Qatar). Io tsaho io dia nivadika ny volana martsa tamin'io taona io. Mampalahelo fa anisan'izany ireo Moussa Dembele, na dia nahazo naoty ambony aza, dia tsy nomena toerana voalohany taorian'ny ekipa diplaoma. PSG dia variana mividy basy lehibe ihany - ny tiany Zlatan Ibrahimovic, Javier Pastore, Kevin Gameiro etc.
MAMPALAHELO fa, Dembele, na eo aza ny fanampiana ny klioba handresy ny Al Kass Cup olo-malaza dia tsy nahavita nanangana ny ekipa PSG voalohany. Nanapa-kevitra ny hipetraka ao amin'ny klioba tanàna nahaterahany ilay mpikatroka fahasosorana rehefa nahatsapa ny lalan'ny asany efa nosakanana teo ambany fifehezan'ny Qatar Sports Investments izay vao avy namorona vola.
Moussa Dembele Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra momba ny tantaram-piainana - Mitsangàna amin'ny tantara
Moussa Dembele dia nanao fisintahana mampidi-doza ho fanombohana tanora any ivelany. Tamin'ny taona 16, niditra tamin'ny fizarana anglisy 2 anglisy izy, Fulham izay nahitany azy kolontsaina vaovao, fomba fiasa sy fomba fanao. Amin'ny maha-mahazatra azy amin'ny ekipan'ny Fulham U18, ny fampisehoan'i Dembele dia nahita azy nahazo ny loka Premier League League tamin'ny vanim-potoana voalohany niaraka tamin'ny fikambanana.
Moussa Dembele nanao ny marika niaraka tamin'i Fulham rehefa nahazo ny loka Football an'ny Young Football League. Image Credit- BBC
Ny fiakaran'ny meteora Dembele avy ao amin'ny Fulham's Craven Cottage dia hita taratra amin'ny lafiny nasionalin'ny U-21 frantsay ary io indray dia nahatonga azy handresy ny France Under-21 Player amin'ny loka isan-taona. Ny tolotra fandefasana dia tsy nisy fotoana taorian'ny nahazoany ny haja. Anisan'ireo tolo-tanana rehetra fa noho ny Celtic dia nanjaka satria Dembele lasa Brendan Rodgers nanao sonia voalohany niaraka tamin'ny fikambanana.
Ny fitsangantsanganana mankany amin'ny tsato Avaratra amin'ny lalana iray hafa mampidi-doza ho an'ny Dembele dia nanohy ny varotra baolina kitra nataony tany amin'ny Premier League Scotland, liga izay tsy dia fantatry ny ankamaroan'ny mpankafy baolina kitra. Moussa Dembele dia nitana andraikitra lehibe ho an'i Celtic nandritry ny lalao Champions League, ao anatin'izany ny fandresena nanohitra an'i Manchester City (isa farany 3-3) tamin'ny dingana tarika.
Moussa Dembele dia niaritra ny fiakarana lehibe amin'ny alàlan'ny fanintonana an'i Man City ao amin'ny League Champions League. Sary nahazo sary- Hailhailmedia
Tamin'ny voalohany nanombohan'ny taom-piandohan'ny vanim-potoana ao ambadiky ny mpiara-miasa aminy atao hoe Leigh Griffiths, ilay frantsay dia nametraka ny tenany ho mpitifitra laharana faha-isa iray an'ny Brendan Rodgers, ka nahatratra ny tanjona 19 - ny dimy tamin'izy ireo dia nanohitra an'i Rangers (mpifaninana lehibe indrindra an'i Celtic). Tanjona Dembele (Tanjona 32 amin'ny lalao 49 anisan'izany ny fiverenana amin'ny lamosina aoriana) no nitarika ny ekipa tamin'ny fandresena ny vanim-potoana nandresena 2018 / 2019 Treble malaza. Io fandresena io dia nahita ireo mpankafy nanamarika azy ho maherifo.
Tamin'ny vanim-potoana 1 fotsiny miaraka amin'ny Celtic, Moussa Dembele 3 tropy ary nahazo isa 32 tanjona. Image Credit- Twitter
Ny fandresena ny Treble dia nahita an'i Dembele nanambara ny tenany tamin'ny fomba lehibe mba ho any amin'ny klioba eropeana. Tamin'ny 31st tamin'ny volana Aogositra 2018 dia nanapa-kevitra ny hiverina any amin'ny fireneny ny mpiady tongotra 6, tamin'ity indray mitoraka ity ho an'ny klioba Ligue 1 Lyon.
NY FIVAROTANA TANINDRAZANA: Miandry valifaty ao amin'ny PSG i Moussa Dembele ary tamin'io fotoana io dia nitranga kely noho ny 6 volana niarahana tamin'i Lyon. Ho an'ireo mpankafy PSG sasany, ny mijery ny isa amin'ny haino aman-jery mpifaninana aminy dia ampahany sy ampahany amin'ny lalao. Saingy mahita Moussa Dembele (izay niara-nilalao taminy) famandrihana DEFLATED na ny mpankafy sy ny mpilalao. Moussa Dembele dia nankalaza tamin'ny klioba taloha izay naneho tsy finoana azy taminy.
Moussa Dembele dia nandoa vola tao amin'ny PSG, nametraka ny mpiandry tory hatory sy nampangina ny fampiasam-bola be dia be an'ny klioba. Sary nahazoany sary FourFourTwo
Azo antoka fa nandoa vola tany Dembele ny sorona nanomboka tamin'ny fotoana nijanonany tao Lyon. Hatramin'ny niampangana an'i PSG dia nanohy ny asany izy fiakarana meteorika, hira iray nahatonga azy ho lasa iray amin'ireo tovolahy mafana indrindra amin'ny baolina kitra eropeana. Ny fisondrotan'i Dembele any Lyon dia azo ampitahaina amin'ny an'ny an'ny Karim Benzema ary Alexandre Lacazette izay zokiolona frantsay Lyon aminy.
Moussa Dembele Mitsangàna amin'ny Credits sary amin'ny tantara malaza: Express, 360nobs ary Twitter
Ny ambiny, araka ny filazantsika foana, dia tantara izao.
Moussa Dembele Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra momba ny tantaram-piainana - Relationship Life
Miaraka amin'ny fahombiazana rehetra notontosaina nandritra ny taona maro dia azo antoka fa tsy maintsy nisaintsaina ireo mpankafy baolina kitra iza ilay sakaizan'i Moussa Dembele. Tsy azo lavina ny zava-misy fa ny endriny mahafatifaty / tsara tarehy miaraka amin'ny fomba milalao dia tsy hametraka azy eo an-tampon'ny lisitra fanirian'ny tovovavy rehetra.
Ny mpankafy dia nanontany momba ny hoe iza avy i Moussa Dembele sakaiza. Image Credit- Instagram
Taorian'ny fikarohana be dia be tao amin'ny Internet, niseho tamin'ny fotoana nanoratana dia nanao ezaka i Mousa Dembele mba tsy hampahafantatra hoe iza ny sipany na ny vadiny (izany fa raha efa manambady izy). Na mety hoe tsy misy mpitovo izy, izay midika fa tsy misy WAG.
Fantatsika indraindray fa tsy azo avela heloka ny baolina kitra indrindra rehefa mifangaro izany amin'ny resaka fifandraisana. Noho io antony io, mety ho i Moussa Dembele no tiana hifantoka fotsiny amin'ny asany fa tsy mitady sipa manambady na iray izay mety ho vady.
Moussa Dembele Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra momba ny tantaram-piainana - Fiainana manokana
Ny hahafantaranao Moussa Dembele Life Life Facts dia hanampy anao hahazo sary feno momba ny toetrany.
Araka ny voalaza teo aloha dia teraka henatra sy mangina i Moussa Dembele, nefa tat found aoriana dia nahita antony nanovana ny fomba fijeriny tamin'ny fiainana rehefa nihalehibe izy ary lasa matanjaka. Ny tantarany fahombiazana dia tsy tonga raha tsy nanao sorona. Nandritra ny taona maro izay dia nanaporofo tamin'ny mpankafy baolina kitra i Dembele fa afaka mora foana amin'ny famokarana angovo izay manodidina azy izy, araka ny voamarina tamin'ny diany nanerana an'i Angletera ka hatrany Scottland. Moussa Dembele dia mahavita mamantatra ny ho avy ary fantany tsara ny zavatra tadiaviny, ny toerana hisy azy ary ny mety hataony dimy na folo taona manomboka amin'ny fotoana nanoratana.
Amin'ny pejy iray hafa amin'ny fiainany manokana, Moussa Dembele mankahala ny fampanantenana satria efa niharan'izany izy fony izy tao amin'ny oniversite PSG. Noho izany, manana famantaranandro izy izay mandeha manaraka izao;
Ny olona tsy misy teniny dia tsy inona (tsy misy olona).
Fantatrao an'i Moussa Dembele Fiainana manokana tsy lavitra ny Football. Sary: Twitter
Moussa Dembele Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra momba ny tantaram-piainana - Lifestyle
Amin'ny fotoana anoratana, Moussa dia mahazo 48,000 € isan-kerinandro. Vola be dia be io, ampy ho azy iainana. Na izany aza, raha nitsara ireo lahatsoratra tao amin'ny kaontiny media sosialy, Moussa Dembele dia mahay mitantana ny volany sy dTsy safidy sarotra ho azy ny fitrandrahana ny tena ilaina sy ny fahafinaretana amin'izao fotoana izao. Tsy misy marika fiara matanjaka, manthions, boozes, vehivavy sns.
Moussa Dembele Fiainana- Izy amin'ny fotoana nanoratana dia tsy miaina an-tanety. Credits: Gym4you
Eo amin'ny fomba fiainany ihany koa, Moussa Dembele dia olona iray izay matetika mahita ny tenany ao anaty orinasa iray tsy mitovy ao aminy. Ilay ankizilahy saro-kenatra sy mangina ankehitriny dia mahita ny tenany ho voalohany amin'ny zava-drehetra - avy amin'ny asa mankany amin'ny fiaraha-mikorana ara-tsosialy.
Moussa Dembele Fiainana- Miaraha-monina izy ary efa mianatra namana. Sary: Instagram
Moussa Dembele Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra momba ny tantaram-piainana - Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Ny fahombiazan'ny fianakavian'i Moussa Dembele dia mifamatotra aminy (ny mpanamboatra mofo) noho ny nanatontosany ny baolina kitra. Tamin'ny fotoana nanoratana dia nanangana paikady hiatrehana ny lazan'ny fianakaviana iray ao amin'ny fianakaviany ny fianakavian'i Dembele.
Amin'ny fotoana fanoratana, rehetra Ny olona ao amin'ny fianakaviana (reny, dadanay, rahavaviny, sns) dia mitantana ny fahombiazan'i Moussa amin'ny fiainana fiainana manokana sy ambany any Frantsa na dia eo aza ny paparazzi foana amin'ny prowl sy ny fomba maro ahafahana mifandray amin'ny media sosialy. Raha tsy fantatry ny ray aman-dreny sy rahalahin'i Moussa Dembele ny pejin'ny media sosialy, azo jerena ny rahavaviny fa apetrany manokana izy (amin'ny fotoana anoratana) ka izay mpanaraka nankatoavina ihany no hahita izay zarainy.
Moussa Dembele Sister dia manana ny kaontiny Instagram, hany ka ny mpanaraka nankatoavina ihany no hahita izay zarainy
Moussa Dembele Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra momba ny tantaram-piainana - Untold Facts
Ny DEMBELES Best 10 (2019): Tsy vaovao intsony izany fa misy ekipa mpilalao baolina manana anaranaDembele'. Ny anarana 'Demeble'dia malaza eo amin'ny mpilalao baolina kitra am-pirenen'ny fianakaviana Afrikanina andrefana, ny ankamaroany avy any amin'ny tanin'i Mali. Amin'ity fotoam-pivoriana ity, dia nosononay teo amin'ny lalao ny 10 tsara indrindra Dembeles ao amin'ny lalao.
Fiainana eo amin'ny LifeBogger mitondra ny 10 Tsara indrindra avy amin'ny am-polony an-jatony anjakan'ny baolina kitra. nahazoan-dalana: Barcablaugranes, SportsMole, Mercato365, Goal, 90Min, Grimsby sy Twitter
Anisan'izy ireo ny 1: 1 - Ousmane Dembele, 2 - Moussa Dembele tena manokana, 3 - Mousa Dembele, 4 - Karamoko Dembele, 5 - Mana Dembele, 6 - Siriki Dembele, 7 - Malaly Dembele, 8 - Bira Dembele, 9 - Mahamadou Dembele ary 10 - Aliou Dembele.
Ny fampitana bola: Ho an'i Moussa Dembele, ny fitazonana ny masony mandritra ny fotoana henjana amin'ny lalao baolina kitra dia saika tsy azo ialana. Tena mifandraika amin'izany Phil Jones ' fanehoana endrika eo amin'ny fotoana mitovy.
Sarin'ny Moussa Dembele Eye Express. Credits sary: Sun, SportsMole, Mercato365, Skysports ary Twitter
Ny fanazavana momba ny biolojia amin'i Moussa Dembele maso: Ny fihoaran'ny masony dia vokatry ny hetsika an-tsitrapo izay misy fifandraisana be dia be sy fifandraisana amin'ny hozatra. Mandritra ny fotoana somary maharikoriko amin'ny lalao baolina kitra no mitranga izany.
MIEZAHA HAHAY: Misaotra tamin'ny famakiana ny tantaran'ny Moussa Dembele Childhood Story Plus Untold Biography Facts. amin'ny LifeBogger, miezaka ny hisian ny fahitsiana sy ny rariny isika. Raha mahita zavatra tsy tsara ianao dia miangavy anao hizara izany amin'ny fanehoan-kevitra eto ambany. Hajainay sy hajainay foana ny hevitrao.